သင့်ဘဝ၏ အကောင်းဆုံး အခမ်းအနားကို မကြာမီ စတင်ပါတော့မည်။
သင့်စိတ်ထဲ ထာဝရ စွဲထင်နေတော့မည့် ဆန်းကျယ်သော၊ စိတ်ကူးယဉ်ဆန်သော အခိုက်အတန့်များကို သင်ရရှိပါလိမ့်မည်။
သင့်အား ကမ္ဘာပေါ်တွင် မည်သူထက်မဆို ပိုပြီး လှပကျော့ရှင်းသူ တစ်ဦးအဖြစ် သတ်မှတ်ပြီး၊ သင်၏ စိတ်အချမ်းသာဆုံး အခိုက်အတန့်များအတွက် ကျွန်ုပ်တို့က သင့်အတွက် အစစ အရာရာပြင်ဆင်ထားပေးပါသည်။ ရိုးရာအစဉ်မပျက် ဂန္ဓဝင်မြောက်သည့် မင်္ဂလာပွဲမှသည် ခေတ်မှီပြီးဆန်းကျယ်သော အပြင်အဆင်နှင့်အတူ ကျော့ရှင်းလှပပြီး သာယာနာပျော်ဖွယ်ကောင်းသော မင်္ဂလာပွဲအထိ အမျိုးမျိုးသော မင်္ဂလာဧည့်ခံပွဲပုံစံများအား ကျွန်ုပ်တို့က အကြံပြုပေးအပ်ပြီး မိမိတို့၏ တန်ဖိုးကြီး သော၊ အများနှင့်မတူသော ပန်းအလှဆင်ယင်မှု၊ ထိပ်သီး ဟင်းလျာများ၊ အသေးစိတ် ချဲ့ထွင်ဝန်ဆောင်ပေးမှု များနှင့်အတူ စင်ကြယ်ဖြူဆွတ်နေသည့် မင်္ဂလာဝတ်စုံ ဖြင့် အလှပဆုံး အတောက်ပဆုံးဖြင့် ဂုဏ်ယူ နိုင်ပါသည်။ သင့် ပွဲတော်ကိုစတင်လိုက်ပြီး Lotte Hotels တွင် ပါတီပွဲဆင်နွှဲလိုက်ပါ။
မင်္ဂလာဧည့်ခံပွဲ ဟောလ်ခန်းမ မြင်ကွင်း
မင်္ဂလာဧည့်ခံပွဲ ဟောလ်ခန်းမ မြင်
TEL +82-2-3213-1777 ခေါရြနြ
TEL +82-2-771-7474 ခေါရြနြ
TEL +82-2-411-7575 ခေါရြနြ
TEL +82-52-960-4200 ခေါရြနြ
TEL +82-64-730-1050~1 ခေါရြနြ
Lotte Hotels & Resorts ၏ အစည်းအဝေးနှင့် မင်္ဂလာဧည့်ခ
Lotte Family Club (Lotte ဟိုတယ်မိသားစုကလပ်)
သင်၏ကောင်းချီးမြှောက်သော နေ့ရက်ကို သင်အမှတ်ရရေးအတွက် ပြင်ဆင်ပေးထားပါသည်။
ရိုးသားတည်ကြည်သော ဝန်ဆောင်မှုမှာ သင်အား ကြည်နှုးစေရန် ဒီဇိုင်းဆွဲထားပါသည်။ သင်သည် Lotte ဟိုတယ်မိသားစုကလပ် အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်သွားသည်နှင့် သင်၏ကောင်းမြတ်သော နေ့ရက်အကြောင်း သင် အမြဲ သတိရစေမည့် အမည်တူမျိုးစုံတူသော အကျိုးခံစားခွင့်များနှင့် ကာစတာမာ ဝန်ဆောာင်မှုများကို သင်ရယူသုံးစွဲနိုင်ပါမည်။
1. မင်္ဂလာဧည့်ခံပွဲ ကြိုတင်မှာယူမှု (ဧည့်သည်ပေါင်း ၃၀၀ နှင့်အထက်) နှင့်အတူ တစ်ညတာ အခမဲ့တည်းခိုခွင့် ကူပွန်ကိုပေးအပ်သွားပါမည်။ (မင်္ဂလာဧည့်ခံပွဲနေ့ သို့မဟုတ် ထိုနေ့အကြိုတစ်ရက်အတွက် ကန့်သတ်ရှိသည်)
2. မင်္ဂလာဧည့်ခံပွဲ ပက်ကေ့ခ်ျနှုန်းထားတစ်ခုကို မည်သည့် Lotte Hotel တွင်မဆို ပျားရည်ဆမ်းခရီးအဖြစ် တည်းခိုနေသော သူများထံသို့ ကမ်းလှမ်းပေးအပ်သွားပါမည်။
* ဟိုတယ်ပေါ်မူတည်၍ ကွဲပြားနိုင်သည်။
လေဆိပ်သို့ လင်မုိုစီး ဇိမ်ခံ ကားဖြင့်အကြိုအပို့လုပ်ပေးမှုကို သတိုးသားနှင့် သတိုးသမီးထံသို့ ပေးအပ် သွားပါမည်(ဧည့်သည်ပေါင်း ၃၀၀ နှင့်အထက်)။ မိမိတို့၏ မင်္ဂလာဧည့်ခံပွဲ ကာစတာမာများအတွက်သာ Lotte Hotel မှအထူးသီးသန့်ကမ်းလှမ်းထားသည့် VIP ဝန်ဆောင်မှုကို အတွေ့အကြုံရယူလိုက်ပါ။
ရွေးချယ်ထားသည့် မီနျူးအတွက် အစမ်းသဘော လုပ်နိုင်သော ဝန်ဆောင်မှုကို မင်္ဂလာဧည့်ခံပွဲ ကြိုတင်မှာယူမှုနှင့်အတူလုပ်ရန် ကမ်းလှမ်းထားပါသည်။ အထူးဧည့်သည်တော်များအတွက် ကောင်းမွန်စွာပြင်ဆင်ပေးထားသည့် LOTTE HOTELS & RESORTS MEETINGS & WEDDINGS နိဒါန်း၏အကောင်းဆုံး မီနျူးကို အတွေ့အကြုံရယူလိုက်ပါ။